iyini imikhosi yeskram esheshayo?
none Beshesha Yimiphi Imikhosi Yesikram Eseshesha?
Yimiphi Imikhosi Yesikram Eseshesha?
Isikram sinemikhosi emine eyinhloko eletha ukwakheka ku-sprint ngayinye:
Ukuhlela kwe-Sprint: Umhlangano wokuhlela weqembu onquma okufanele uqedele ku-sprint ezayo.
Ukuma kwansuku zonke: Eyaziwa nangokuthi isikram yansuku zonke, umhlangano omncane wemizuzu engu-15 weqembu lesoftware elizovumelanisa.
Idemo ye-Sprint: Umhlangano wokwabelana lapho iqembu likhombisa lokho abakuthumele kuleyo sprint.
Ukubheka emuva kwe-Sprint: Ukubuyekezwa kwalokho okwenzile nokungahambanga kahle nezenzo zokwenza i-sprint elandelayo ibe ngcono.
Inhloso yomcimbi wokuHlela we-Sprint ukusetha lonke iqembu ukuze liphumelele kuyo yonke i-sprint.
Abahlanganyeli abadingekayo yibo:
Ukuhlelwa kwe-sprint kwenzeka ngaphambi nje kokuthi i-sprint iqale futhi imvamisa ihlala ihora elilodwa kuya kwamabili.
Uma kuza emhlanganweni, umnikazi womkhiqizo uzoba nohlu olubekwe eqhulwini lwezinto ezisilele emuva zomkhiqizo.
Umnikazi womkhiqizo uxoxa ngento ngayinye noma indaba yomsebenzisi nethimba lokuthuthukisa, futhi iqembu ngokulinganayo lilinganisela umzamo obandakanyekile.
Ithimba lezentuthuko lizobe selibikezela isibikezelo sejubane, imvamisa ngokuya ngejubane leqembu, elichaza ukuthi iqembu lingaqedela umsebenzi ongakanani kusuka emuva komkhiqizo. Lowo mzimba womsebenzi ube ususilela emuva nge-sprint.
Ngabe uKanban unomcimbi wokuhlela we-Sprint?
Yebo, amaqembu e-Kanban nawo ayahlela, kepha awekho kuhlelo lokulinganisa olungaguquki ngokuhlela okusemthethweni kwe-sprint.
Ukuhlelwa kweSprint nokuCwengisiswa Kwendaba
Ezinye izinhlangano zisebenzisa umhlangano wokuhlela nge-sprint ukukhipha imininingwane yendaba ngayinye yomsebenzisi. Eqinisweni, kukhuthazwa kakhulu ukuthi bonke ababambiqhaza bahlanganyele ezingxoxweni eziphumelelayo ukuze kuqinisekiswe ukuthi wonke umuntu uyabuqonda ubukhulu bomsebenzi.
Ezinye izinhlangano zinezikhathi ezehlukile zokuCwengiswa Kwendaba lapho zixoxa khona ngemininingwane yendaba ngayinye kanye nesilinganiso esibi sokuthi ungakanani umsebenzi obandakanyekile ekuhambiseni izindaba. Imvamisa izindaba zehlukaniswa zibe imisebenzi eminingana.
Ngokuthola lezi zikhathi zokuhlukaniswa kwezindaba ezihlukile, imvamisa ngaphambi kwe-sprint elandelayo, iseshini yokuhlela i-sprint iba mfushane ngesikhathi futhi ihlose ukwamukela izindaba kuphela ku-sprint ezayo.
Ukuma kwansuku zonke
Umhlangano wokuma wansuku zonke wenzelwe ukwazisa ngokushesha wonke umuntu ngokwenzeka kulo lonke iqembu. Akufanele kube umhlangano wesimo onemininingwane.
Ithoni kufanele ibe lula futhi ibe mnandi, kepha ifundise. Cela ilungu ngalinye leqembu liphendule imibuzo elandelayo:
Yini engiyiqedile izolo?
Ngizosebenza ngani namuhla?
Ngabe ngivinjelwe yilutho?
Ukuma kwansuku zonke kwenzeka kanye ngosuku, imvamisa ekuseni futhi kudinga iqembu lokuthuthukisa, iScrumMaster, noMnikazi woMkhiqizo ukuthi babe khona.
Kuyelulekwa ukuthi ubude besikhathi abukho ngaphezu kwemizuzu eyi-15, yingakho inhloso yokusukuma ukwenza umhlangano ube mfushane.
Enye yezinzuzo zomhlangano wokuma wansuku zonke ukuthi wenza ukuthi abantu bathembeke kubo uqobo.
Kukhona ukuziphendulela okuphelele ekubikeni ukuthi yimuphi umsebenzi owuqede izolo phambi kontanga yakho. Akekho ofuna ukuba yilungu leqembu elihlala lenza into efanayo futhi lingenzi inqubekela phambili.
Amaqembu asatshalalisiwe asebenzisa ingqungquthela yevidiyo noma ingxoxo yeqembu ukuvala igebe lebanga.
Ekupheleni kwe-sprint, iqembu ngalinye lifinyelela kwidemo noma libonise izici zalo ezisanda kwakhiwa noma nje ngokujwayelekile lokho abebesebenza kukho ngesikhathi se-sprint.
Lesi yisikhathi sokuba iqembu ligubhe lokho elikufezile, likhombise umsebenzi oqediwe ngaphakathi kokuphindaphindwa, futhi lithole impendulo ngokushesha kubabambiqhaza bephrojekthi.
Isikhathi singahluka kunani lezinto ezizoboniswa ngethimba ngalinye.
Umsebenzi uvamise ukuboniswa kubahlanganyeli beqembu elifanele, okuyiqembu lezentuthuko, iScrumMaster, noMnikazi woMkhiqizo kanye namanye amaqembu nababambiqhaza bephrojekthi.
Ukuze i-demo ibe nenani nentshisekelo kwabanye, umsebenzi kufanele ube ngokugcwele kuyabonakala futhi kuhlangatshezwana nomugqa wekhwalithi weqembu ozothathwa njengokuphelele futhi ukulungele ukubonisa ekubuyekezweni.
Ingabe iDemo Yomkhiqizo isebenza ku-Kanban?
Njengokuhlela, ukubuyekezwa kwamaqembu eKanban kufanele kuhambisane nezinyathelo ezinkulu zethimba kunokuba kube ku-cadence ehleliwe.
Futhi ekugcineni ku-sprint retrospective eyenzeka ekugcineni kwe-sprint, imvamisa ngemuva kwedemo ye-sprint futhi ihlala cishe ihora elilodwa. Abahlanganyeli yithimba lokuthuthukisa, iScrumMaster, noMnikazi woMkhiqizo.
I-Agile imayelana nokwenza ngcono okuqhubekayo nokuthola impendulo esheshayo ukwenza umkhiqizo namasiko entuthuko abe ngcono.
Ama-Retrospectives asiza iqembu ukuthi liqonde ukuthi yini okusebenze kahle – nokuthi yini okungasebenzanga.
Ukuthuthuka okuqhubekayo yilokho okusimamisa futhi okuqhubela phambili ukuthuthukiswa ngaphakathi kweqembu eligijimayo, futhi ama-retrospectives ayingxenye ebalulekile yalokho .
Ama-retrospectives we-Sprint akufanele kube okwenzelwe nje ukwenza izikhalazo ngaphandle kokuthatha isinyathelo.
Ama-Retrospectives ayindlela yokuhlonza ukuthi yini esebenzayo ukuze iqembu liqhubeke nokugxila kulezo zindawo nokuthi yini okungasebenzi ukuze iqembu likwazi ukuxoxa futhi libambisane ukuthola izixazululo zokudala ezinkingeni.
Ngabe iKanban nayo ine-Sprint Retrospective?
Amaqembu weSkram enza ukubuyela emuva emuva ngokususelwa ku-cadence engaguquki. Akukho okuvimba amaqembu eKanban ukuthi ahlomule kuma-retrospectives ngezikhathi ezithile, futhi.
ukuqala kanjani ukuhlolwa okuzenzakalelayo kusuka ekuqaleni
curl thola isicelo ngamapharamitha
imikhuba emihle ye-qa ku-agile
Izisekelo ze-DevOps kanye nemiqondo
Inhloko ye-QA - Izindima Nemithwalo Yemfanelo
Izisekelo Zokugenca Ngokuziphatha
Ungalukhetha Kanjani Luluphi Uvivinyo Lokuzenzakalela?
Izindlela Zokuskena Inethiwekhi
Umehluko Phakathi Kokuthuthuka Okuphindaphindayo nokwandayo ku-Agile
Okuguquguqukayo kwePython - Ungamemezela kanjani futhi usebenzise okuguqukayo ePython
I-Agile Testing Mindset neqhaza le-Agile Tester